« Les timbrés de l’orthographe » : mitohy ny fisoratana anarana | NewsMada
« Les timbrés de l’orthographe » : mitohy ny fisoratana anarana
Efa nanomboka ny 16 novambra teo ary tsy hifarana raha tsy ny 4 marsa ny fisoratana anarana amin’ilay fifaninanana « Les timbrés de l’orthographe ». Hetsika karakarain’ny trano fanontana L’Opportun sy ny Fondation Alliance française, ho an’ny eto amintsika. Fomba ahafahana misoratra anarana ny miditra ho mpikambana ao amin’ny AFT ary maka maimaimpoana ny taratasy hofenoina.
Araka izany anarany izany, fifaninanana manoratra na koa maneho ny fahaiza-manoratra teny frantsay izy ity. Tanterahina any amin’ny firenena maro ny « Les timbrés de l’orthographe » ka andiany fahatelo ny hotontosaina eto amintsika amin’ity taona ity raha efa tonga amin’ny andiany fahenina ny any Frantsa.
Mizara sokajy telo ny mpifaninana : ny « cadets », ireo teraka teo anelanelan’ny taona 2003 sy 2007 ; ny « juniors », ny teraka teo anelanelan’ny 1998 sy 2002 ; ary ny « adultes », ireo teraka tamin’ny 1997 na mialoha io taona io.
Hotanterahina, etsy amin’ny AFT ny 19 marsa izao, ny dingan’ny fifanintsanana amin’ity lalao ity. Hihazo an’i Paris kosa ireo mendrika indrindra, ary hiatrika ny famaranana, hatao ny 11 jona 2016.
Tanjon’ny mpikarakara ity fifaninanana ity ny hampahatsiahy ny fitsipiky ny teny frantsay : ireo « fandripandrika » sy ny maha sarotra azy indraindray. Eo koa ny fanomezan-danja sy fiarovana hatrany ity tenim-pirenena, azo lazaina ho anisan’ny be mpampiasa maneran-tany ity. Ankoatra izany, apetraky ny mpikarakara ho fomba iray enti-miady amin’ny tsy fahaiza-mamaky teny sy manoratra ny « Les timbrés de l’orthographe ».